I-Cozy Riverfront 3-BR/ 2- BTH/ Pine Bluff
Yonwabela indawo yokubaleka yabucala kuMlambo iArkansas kweli khaya lihonjisiweyo lihle! Vuka uyonwabele ikofu yakho ngelixa ubukele amaxhama amahle azulazula ngasemlanjeni. Okulandelayo, unokhetho oluninzi lwemini yakho njengoko le propati ifanelekile ukuloba, ukuqubha, ukukhwela isikhephe, ukuxhoma ujikeleze umgodi womlilo kunye nemidlalo yangaphandle. Yiza nesikhephe sakho kunye nentonga yokuloba ukuze ukonwabele ukufikelela kwi-dock. Eli khaya lihle linamagumbi okulala ama-3 lisanda kulungiswa kwaye lixhotyiswe ngokupheleleyo. Ibekwe ngokufanelekileyo kufutshane neSaracen Casino.
Yonwabela iholide ongasayi kulibaleka nosapho okanye nabahlobo bakho. Le propathi ibanzi ibandakanya: amagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ayi-2, igumbi lokuhlamba impahla, elikhuselwe kwipatio kunye nedesika yangaphandle. Sicoca ngokucokisekileyo kwaye sicoca zonke iindawo zale ndawo.
Ibekwe kakuhle kwi-Island Harbour Estates engqongwe nguMlambo iArkansas. Ikhaya lethu likwindawo ezolileyo yosapho enobuhlobo. Yonwabela imbonakalo yepanoramic eyimfihlo kunye nosapho kunye nabahlobo bakho.